トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ Ama lagu daydo rakibo qowladda pachinko inta badan waa Xintai, ama inta badan loo isticmaalaa miiska
Nationwide waxaa jira waxyaabo badan qowladda pachinko ah, laakiin dukaamada Xintai iyo dukaamo iyo miiska used ee xarunta waa xarunta, waxaa jira noocyo kala duwan oo tii pachinko. Muuqaaladan oo ka mid ah mashiinada cusub inta badan waa qowladda pachinko ah, oo ku yaalla meel u fududaynay xad macaamiisha soo ururay, idin soo bixinay waa xaqiiqada ah in ku dhow yahay inuu ku tartamaya dukaan badan. Xintai waa, maxaa yeelay, waxay ku qaadan kartaa qiimaha weyn, iyo sida iibka iyo faa'iido guud ee aan ilaa xad aad loo dhawro, oo aad noqon kuwo ku adag. Haddii aad rabto in aad soo bandhigto a
Xintai ee u tiro badan, waa dhowr maalmood Xintai of sal-dhigida, ayaa in ka badan in lagu daydo kale Xintai waa mashiinka soo kabashada. dhibic Tani waa, waxaan khasaaro of Xintai inta badan waa qowladda pachinko ah. Xintai in qowladda pachinko ee xaruntu ku, haddii aad rabto in aad u ciyaaro kale oo aan ahayn Xintai, waxaan u malaynayaa in waxa fiican si ay u tagaan in uu ciyaaro wakhti ah in dhowr maalmood ka hordhaca Xintai ka dib.
Guud ahaan, Xintai waa inta badan dareen, dukaanka for top-soo bandhigay in Note gobolka! ?
Asal ahaan, haddii aad rabto in aad hogaanka u sal-dhigida ee Xintai gobolka, haddii aadan awoodin inaad ku dhacay oo keliya dukaanka Xintai noqon, dukaamo badan oo u malaynayaa in ay jiraan wax loo baahan yahay in ay sii daayaan heshay ku dhibin. Si kastaba ha ahaatee, muddo dheer in lagu daydo oo caan ah, haddii aad rabto in aad u koraan in model ugu weyn-calaamada dukaanka, waxaad laga yaabaa rabin in la furo. Goobtani waxa, waa in fikradda ah maamulka.
iyo, sida muuqaalada madal loo isticmaalo inta badan waa qowladda pachinko ah, waa wax ka yar ee suuragalka ah oo ku dhow inuu ku tartamaya dukaanka waa dukaan magaalada hareeraheeda ah, waxaan u malaynayaa in ay tahay saldhig macmiisha wayn waa xarun joogto ah. Waxaan gelin badan oo madal loo isticmaalo, qowladda pachinko saldhigga macaamiisha waa mid yara lakabka jir waxa uu ku yaalaa arrimuhu sare. Recent Xintai waa, nooca dagaalka ah oo kala duwanaansho itimaalka qarsoon, iwm, waayo, waxaa jira noocyo badan oo adag, u iman doonaan inay u muuqdaan in ay la neceb yahay. Haddii
miiska loo isticmaalo, sida Xintai sidoo kale la aqbalay by macaamiisha si xishoodo ka fog ee, waa in ay u badan tahay in ay ku kici ee iibka. Haddii ay taasi dhacdo, waxaan leenahay ma jirto sabab ku qasbi hordhaca ah ee ka mashiinada cusub. In agagaarka tii pachinko, gaar ahaan iyada oo aan macaamiil badan oo ka mid ah socodka, si loo kordhiyo iibka ah, ka adag tahay hore ee dukaanka saldhiga. Taasi dhibic, block isticmaalo, kharashka Xintai waxaa sidoo kale ka jaban marka la barbar dhigo, ma aha markii dib u soo kabashada ee kharashka ayaa sidoo kale si fudud Xeebajoogta sidoo kale jiri doona wax. Tan iyo
Xintai ku riday badan oo, sababta oo ah dib u soo kabashada lama kaliya daran Toka taagan isticmaalo, waxaa jira xaqiiqada ku jirin in dhaqdhaqaaqa kaashka ma noqon doonto in aad u daran. Dhammaan waxaa lagu go'aamiyaa goobta dukaanka pachinko iyo macaamiisha iyo siyaasadda iibka dukaamada. Inta lagu jiro, laakiin waxaa kale oo laga yaabaa in qowladda pachinko ee dhaqdhaqaaqa kaashka daran ah, qowladda pachinko sida uu yahay, waxaan qabaa in sida ugu dhakhsaha badan go'aanka waa suurto gal ah haddii aad eegto xaaladda heshay iyo sixitaanka cidiyaha.
by xakamaynayaan qiimaha bilowga ah la miiska loo isticmaalo, sida dukaanka siyaasadda ee hoos ku heshay si joogtada ah, siyaasadaha maamulka fiicnaan lahayd in laga fikiro in uu jiro kaliya tirada Pachinkoya.
sidoo kale gaar ahaan qarniyadii dhexe waxaa taagan Xintai, tii pachinko in aadan dhalin kubada si hordhaca ah ee maalinteedii kowaad, waxaan u maleynayaa in hab-kabashada u malayn kartaa in ay tahay dukaan xoog leh. celcelis eeg, soo bandhigay maalintii ugu horraysay sida Xintai waa, dukaan aad u badan xoojiyay musmaarro looga dhigo Barker waa yar. dukaanka Pachinko nooc kasta oo ama wax qowladda pachinko waa inaan kuu raaco, fadlan isku day in aad hubiso.